बच्चाहरु को कोठा - iSearch
बच्चा जन्मेको छैन, नयाँ परिवार भित्र व्यस्त हुनाले पहिले नै व्यस्त हुन्छ। पेट को परिमिति संग न केवल प्रत्याशा बढ्छ, तर सानो पार्थिव नागरिक को लागि सबै भन्दा सही को इच्छा को इच्छा पनि। निस्सन्देह, यो पनि नर्सरी को भित्र पनि समावेश छ।
धेरै जना बुबा-पिताहरू घटनाको लागि पूर्णतया तयार छन्: जब आमाले अचानक आफ्नो घोंसले निर्माण गर्न थाल्छ। र यो एक किंवदंती छैन! यो वैज्ञानिकले पनि5को बारेमा प्रमाणित गरेको छ। गर्भावस्था महिनाले सामान्यतया "घनिष्ठ निर्माण" को रूपमा उल्लेख गरेको प्रवृत्ति प्रयोग गर्दछ। पशु संसारको रूपमा, आशावादी आमा अब सन्तानको आगमनको लागि सम्भवतः घरको आराम गर्न हरेक प्रयास गर्दछ।
त्यो प्रायः हानिकारक हुन्छ। एक मिठो संगीत बक्सको साथ, सायद, तपाईं भर्खर सक्नुहुन्न। र तपाइँले यो जान्नु अघि, न केवल अध्ययनले नयाँ नर्सरीको मार्ग दिएको छ, यसले पहिले नै सबैभन्दा सुन्दर पास्ताल रंगहरूमा चमक दिन्छ!
अब दायाँ उपकरणको प्रश्न माथि छ। किनभने बच्चाको कोठा मात्र सहज हुनु हुँदैन, तर मुख्यतया व्यावहारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन्। विशेष रूप देखि परिवर्तनशील कोठा को स्थापित गर्न को लागी छ कि सबै केहि आसान पहुंच को भित्र छ, तपाईंको स्थिति छोडेर बच्चा को सुरक्षित हात ले। कपडा बदल्नको लागि एक फर्म ठाउँ बस डायपर र हेरचाह क्रीम संग शेल्फ को रूपमा सुलभ हुनुपर्छ। पनि एक लक गर्न सकिने डायपर पाल धेरै टाढा हुँदैन।
पूर्ण कोठा सेट अप गर्न, धेरै खरीदहरू आवश्यक छ। केहि फर्नीचर विशेष गरी बच्चाहरु को आवश्यकताहरु लाई अनुकूलित गरिएको छ। एक परिवर्तन तालिका र एक खाट मानक हो। केहि स्तनपान व्यक्तिहरूले पनि रातो समय स्तनपान गर्न सम्भव भएसम्म एक चट्टान कुर्सी वा कुर्सी कोठामा फेला पार्न सजिलो छ। धेरै फर्नीचरहरू पहिले नै दूरदर्शितासँग खरीद गर्न सकिन्छ। आजकल अधिकांश बालबालिकाको लागी बच्चाहरु लाई बच्चाहरु लाई उमेर देखि बढने को लागी डिजाइन गरिएको छ। अक्सर परिवर्तन तालिका (तिनीहरूको परिवर्तनको चटनी घटाउनका लागि) ले कपडे छातीको प्रयोग गर्न पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्छ। पार्वले लम्बाईमा विस्तार गर्न सकिन्छ वा बाडको छेउहरू हटाउँदा अझै पनि जूनियर बिदाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। व्यावहारिक पक्ष-तालिकाबाट, जो आमाबाबुको बिस्तारमा संलग्न हुन सक्छ, आज पनि मोडेलहरू छन् जुन धेरै तरिकामा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्यारा बच्चाहरु को बेंच को रूप मा यसको उपयोग को अतिरिक्त, यो उच्च कुर्सी को रूप मा या एक मेज को रूप मा पनि संशोधित गरेर केहि तत्वहरु को जोड को रूप मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो खरिद गर्न अघि बच्चाहरूको फर्नीचरले उनीहरूको कार्यक्षमतालाई तुलना गर्न उच्च सल्लाह दिन्छ।
तर डिजाइनको छनोट पनि केही ध्यान दिनुपर्छ। किनकि विशेष गरी जब तपाईं बढ्दो फर्नीचरको लागि नर्सरी फर्नीचरमा निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईले एक अनियमित डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्छ: हल्का फर्नीचरलाई राम्रोसँग जोड्न सकिन्छ, ठोस काठ अझ बढी टिकाऊ छ तर भित्ता भन्दा बढी महँगो हुन्छ। रंगीन एनिमेसनहरू वा प्यारा एस्लेट्स बच्चाको कोठामा सुन्दर लगाउन सक्दछ, तर प्रायः सम्भवतः चार वर्ष पुरानो हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो बच्चा वा बालबालिकाको कोठालाई व्यक्तिगत सम्पर्क दिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईले तस्वीरहरू, काठको अक्षरहरू, पनीर चेन वा कोट हुक जस्ता काम गर्नु पर्दछ जुन धेरै प्रयासहरू बिना प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ।
सबै प्रत्याशा संग, यो पनि नर्सरी स्थापित गर्दा एकपटक फेरि तुलना गर्न सल्लाहकारी छ। तपाईंले हाम्रो मार्गदर्शकमा धेरै उपयोगी सुझाव पाउनुहुनेछ।